Kulanka hore ee laba ciyaarood oo xidhiidh ah oo ay afar maalmood gudahood isku haleelayaan Liverpool iyo Arsenal ayaa caawa ka dhacay garoonka Anfield, halkaas oo Reds ay ku qaabilayso Gunners oo labadii jeer ee ugu dambeeyey marna ka badisay marna barbarro ku qabatay.
Labadii ciyaarood ee horyaalka Premier League ee xili ciyaareedkan ay koox walba soo ciyaartayay ayay kasoo hooyeen guulo, waxaanay iska hor imanayaan iyagoo sita min saddex dhibcood, laakiin marka Anfield oo madhan albaabka la iskugu xidho ayuu dagaal adag ku dhex mari doonaa midkii rikoodhka guulaha sii wadan lahaa iyo kii jilbaha dhulka dhigi lahaa ee waji gabaxa garoonka kaga bixi lahaa, inkasta oo ay jirto fursad labaad oo ah inay dhibcaha wadaagaan.
Ka hor kulankooda EFL Cup (Carabao Cup) ee ay Liverpool iyo Arsenal wada ciyaari doonaan Khamiista toddobaadkan, waxa uu tababare Jurgen Klopp ogsoon yahay in kulamadii ugu dambeeyey uu Mikel Arteta ka gacan sarreeyey, waxaase kusii hanjabay inay ka aargoosan doonaan.
Liverpool oo aan garoonkeeda lagaga badinin 60kii ciyaarood ee ugu dambeeyey ee horyaalka Premier League, ayna ugu dambaysay khasaare kusoo gaadha hoygeeda Arpil 2017 ayaa waxay Arsenal la maaggan tahay jab ugu geysato garoonkan, si ay u hesho saddex dhibcood oo ka caawiya inay hoggaanka horyaalka ku siqdo.
Reds oo difaacanaysa koobkan ayaa horyaalka ku bilaabatay isla garoonkeedan, waxaanay 4-3 ku garaaceen Leeds United ciyaar uu saddexlay goolal ah dhaliyey Mohamed Salah. Laakiin kulankii xigay ee ay Chelsea ugu tageen Stamford Bridge ayuu Sadio Mane dhabarka u ritay masuuliyadda dhalinta goolasha, isaga oo saxeexay labadii gool ee kooxdiisu kusoo dhirbaaxday Blues.
Arsenal ayaa dhinaceeda waxay xili ciyaareedkan ku furatay guushii koobka Community Shield ee ay Liverpool rikoodheyaasha kaga qaadeen, waxaanay ku xigsiiyeen Fulham oo 3-0 ay ku garaaceen iyo West Ham oo ay 2-1 kusoo jiidheen.
Daliilka ugu weyn ee Mikel Arteta uu u haysto inuu niyadda ugu dhiso ciyaartoydiisa si ay Liverpool saddexda dhibcood uga qaataan, ayaa waxay tahay in sagaalkii ciyaarood ee ay kooxaha waaweyn la dheeleen intii uu joogay xili ciyaareedkii hore ay soo garaaceen afar ka mid ah shanta kooxood ee waaweyn.
Liverpool ayay laba jeer ka adkaadeen, waxaanay sidoo kale garaaceen Manchester City, Chelsea iyo Leicester City, waxaanu isku dayi doonaa in xiddigihiisa uu ku qanciyo inay leeyihiin awooddii iyo kartidii ay mar kale ku garaaci lahaayeen Liverpool.
Ciyaarta: Liverpool vs Arsenal
Tartanka: Premier League, kulamada 3aad
Waqtiga: 10pm- Saacadda Geeska Afrika
Waxa hubaal ah in Liverpool uu dhaawac kaga maqan yahay kabtankooda Jordan Henderson, sida uu tababare Jurgen Klopp xaqiijiyey. Laacibkan ayaa kasoo kaban waayey dhaawac kasoo gaadhay kulankii Chelsea oo qaybtii hore uu wax ku noqday.
Laakiin Thiago Alcantara oo u sharraxnaa inuu beddelo ayaa isagana la sheegay in aanu tababarka la qaadan kooxda oo uu dhaawacan yahay, si la mid ahna Alisson Becker, waxaana haddii uu soo kaban waayo ay taasi dhibaato ku tahay Jurgen Klopp oo khadka dhexe ka liici doona.
Warka wanaagsan ee Liverpool ay heshay ayaa ah in Joe Gomez uu Jimcihii kusoo laabtay tababarka kaddib markii uu seegay ciyaartii Chelsea oo difaaca uu ka ciyaaray Fabinho oo qaab ciyaareed layaab leh sameeyey.
James Milner ayaa isagana shaki ku jiraa inuu kulankan taam u noqonayo kaddib markii uu dhaawac kasoo gaadhay muruqa, balse waxa aan soo kabanin Joel Matip iyo Chamberlain oo muddo garoomada ka maqnaa.
Dhinaca Arsenal, waxa jira ciyaartooyo dhawr ah oo dhaawac ku maqan laakiin Kiera Tierney ayaa la filayaa inuu taam noqon doono kaddib markii laga saaray liiska ciyaartoyda kooxda kulankii West Ham oo uu waqtigii iskulaynta dhaawac soo gaadhay.
Laacibkan reer Scotland ayaa la filayaa inuu beddelo Saed Kolasinac, sidoo kalena David Luiz ayaa loo badinayaa inuu kasoo garab muuqan doono laacibka ay isku waddanka yihiin ee Gabriel Magalhaes.
Tababare Mikel Arteta waxa aanu heli doonin adeegga ciyaareed ee xiddigaha Sokratis Papasthopoulos iyo Cedric Soares oo kulankani kusoo degdegay iyagoon taam noqonin, halka Shkodran Mustafi, Gabriel Martinelli, Calum Chambers, Pablo Mari iyo Emile Smith Rowe ay dhamaaantood seegayaan kulankan.